Shacabka ku nool Magaalada Muqdisho oo looga digay inay Guryahooda ka kireeyaan Dad aysan Wargelin | Saxil News Network
Shacabka ku nool Magaalada Muqdisho oo looga digay inay Guryahooda ka kireeyaan Dad aysan Wargelin
Muqdisho( Saxilnews)-Wasaaradda Amniga Gudaha Soomaaliya ayaa uga Digtay Shacabka Muqdisho inay Guryahooda ka kireeyaan Dad aanay kusoo Wargelin hay’adaha amniga, kaddib markii dhawaan dowladda la wareegtay guryo laga helay hub iyo walxaha Qarxa.
Afhayeenka Wasaaradda Amniga oo la hadlayay Warbaahinta ayaa sheegay in loo baahan yahay in saldhigyada Booliiska lagu Wargeliyo qofkii laga kireynayo guri, isagoo xusay in tallaabadan ay sahleyso in la ogaado kuwa Ammaanka Car-qaladeynaya, isla markaana lala socdo dadka degaya xaafadaha.
“Milkiilaha Guriga iska leh marka uu doonayo inuu qof ka kireeyo gurigiisa waa inuu tagaa xarunta degmada oo uu ku Wargeliyaa Mas’uuliyiinta Degmada iyo Saldhiga cida uu Gurigiisa ka kireynayo, Warbixintiisana siiyaa cidda uu yahay,” ayuu yiri Maxamed Yuusuf.
Sidoo kale, Afhayeenka Wasaaradda Amniga Gudaha Somalia ayaa xusay inay dowladdu la wareegi doonto guryaha qaraxyada laga soo abaabulo ama laga helo hubka noocyadiisa kala duwan.
“Nidaamkaas adigoo maraya haddii gurigaaga uu wax ku sameeyo qofkii aad ka kireysay, laguma haysto, balse haddii aad qariso oo aadan kusoo soo wargelin saldhigga degmada, haddana Qarax laga fuliyo ama laga helo, dowalddu waa la wareegayaa gurigaaga,” ayuu mar kale yiri Afhayeenka Wasaarada Amniga Gudaha Somalia.
Ugu dambeyn, laamaha Amniga Dowladda ayaa horay digniinno dhowr ah kasoo saaray in Guryaha laga kireeyo dad aan la aqoon, iyadoo maalin ka hor ay Booliisku u dhaceen guri lagu diyaarinayay walxaha qarxa oo ku yaalla Degmada Yaaqshiid.